CASSA MILAN: TOOS ula soco shirka jaraa’id ee milkiilayaasha cusub ee AC Milan – LIVE – Gool FM
CASSA MILAN: TOOS ula soco shirka jaraa’id ee milkiilayaasha cusub ee AC Milan – LIVE
Raage April 14, 2017
(Milano) 14 Abriil 2017 – Kaddib saxiixii iibka ee shalay, iminka waa shirka jaraa’id ee milkiilayaasha cusub oo haatan soo wada gaarey Cassa Milan oo uu ka dhacayo shirka jaraa’id, waxaa goobta jooga Li Yonghong, Han Li, Marco Fassone, Mirabelli iyo rag kale, waxaana la dooranayaa maamulka cusub ee AC Milan iyadoo la balballaarin doono qorshaha mustaqbal ee kooxda Rossoneri. Nala joog si aad ula socoto wararkooda!!
Yonghong Li: “Waxaa na saaran mas’uuliyad wayn, iyo sidoo kale filashada taageerayaasha ee la socota ‘Forza Milan‘. Waxaannu doonaynaa xirfadleey hoowshooda wadan kara, Fassone wuxuu dhisi doonaa Milan-tii mustaqbalka, waa musharraxa ku habboon inuu noqdo guddoonka mustaqbalka. Tallooyinkiisa ayay ku bullaali doontaa Milan, waa inaan noqonnaa koox caalamka ka muuqata, taageerayaasha oo dhami waa inay jeclaadaan. “
Yonghong Li: “Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Berlusconi iyo Fininvest kalsoonida ay na siiyeen. Milan waxay ahayd koox taagan dusha sare 118 sano oo taariikh qurxoon ah. 30-kii sanee ugu dambeeyay wuxuu qaaday koobab fara badan: 8 horyaal, 5 Koobka Horyaallayada Yurub ah (inta uu Berlusconi xilka hayay oo qura) iyo 7 Super Coppa Italianna. Guulahaas oo dhami waxay na tusayaan inuu taageere kasta doonayo Milan oo Yurub kusoo noqota Forza Milan.”
Marco Fassone: “Waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo Mr. Li iyo Mr. Han, kalsoonida ay ii muujiyeen,” ayuu yiri guddoonka cusub ee AC Milan oo ka hadlayay shirka jaraa’id ee Casa Milan. “Waan dadaali doonaa, wayna iga go’an tahay.”
”Waxaan u mahadcelinayaan Barbara Berlusconi iyo Adriano Galliani oo i caawiyay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa taageerayaasha. Berlusconi? Marka laga soo tago tayooyinkiisa kale, waa nin aftahan ah, xalayna wuxuu noo muujiyay jacayl iyo murugo ku saabsan iibka Milan. Waxay ila tahay inaynaan halkan u joogin ganacsi uun, balse aan doonayno inaan sii wadno jacaylkii uu kooxa ku maamulayay.
“Heshiis cusboonaysiinta Donnarumma? Waa muhiimaddeenna 1-aad. Waxaannu xitaa kala hadalnay madaxwaynaha, waana ku dhaqsan doonnaa. Miisaaniyadda kooxda? Waa muhim, ujeedkeennu waa inaan dib u dhisno Milan han leh, waxaana heli doonaa dhaqaalihii aan sidaa ku yeeli lahaa. Montella waa macallin aan jeclahay. UEFA waxay ogolaatay inay dib u dhigto heshiiska dhaqaale wanaaagga”. ayuu yiri ninka kala wadi doona Milan.
Waxaa kooxda lagu iibsadey lacag ka badan 1 bilyan oo euro, 740 milyan oo lagu daray 100 milyan oo dhanka maareeynta ku baxday, iyo 200 milyan oo lagu bixinayo daymaha kooxda, waxaa dheer lacagaha ku bixi doona suuqa kala iibsiga, Milan daymaha lagu leeyahay haatan way ka yar yihiin kuwa naadiyada kale iyo xitaa siduu ahaa sanadkii hore 30 Juun 2016 “.
Montella ma jecel yihiin maamulka cusub? “Si faraxsan baan uga jawaabayaa su’aashaas, runtii waxaan u haynnaa xushmad iyo qiimayn, bishii Juun ee sanadkii hore ayaan muujinnay jacaylkeenna, si buuxda ayaana u taageersannahay Montella.”
Miyay sii joogayaan qaar ka mid ah qoyska Berlusconi: “Haa, way joogayaan, waxaan u mahadcelinayaa Barbara oo naga ogolaatay inay sii ahaato madaxwaynaha khayriyadda Milan Foundation“.
Kulanka dhaqaale wanaagga UEFA financial fair play, “UEFA oo istaahisha mahad celinteenna waxay ogolaadeen inay dib u dhigaan wada hadalkeenna oo awal ahaa 31-ka Maarso. Todobaadka soo aaddan baannu dejin doonnaa qorshe 3 sanaale ah. Waxaana ku kalsoonnahay inaannu UEFA la kulanno bisha Maajo/ May “.
Qandaraasyada De Sciglio iyo Suso? “Waxaa isla berri bilaaban doona howsha waxaana la xiriiri doonnaa wakiillada qaar. Jadwal cariiri ah ayaa i hor yaalla. Waxaa nala jooga rag ka mid ah arbayaashii hore ee Milan calanka u sidi jirey sida Franco Baresi iyo Filippo Galli. Waxaannu doonaynaa inaan kal-ciyaareedka soo aaddan ku bilowno qaab abaabulan oo diyaar ah. “
Derby? “Waxay ahayd ciyaartii iigu dambaysay anigoo ahaa maareeyihii Inter Milan, waxaan haatanna ku bilaabayaa isla derby-ga. Maka yaabteen sida ay iskugu aaddey.”
Garoon cusub: “Waxaannu arrintan go’aan qayaxan ka qaadan doonnaa marka aannu la kulanno maamulka magaalada Milano iyo Inter.”
”Ballamada 100-ka maalmood ee ugu horreeya maamulkeenna? “Waxaan leeyahay laba, midi waa dhismaha kooxdii ciyaari lahayd fasal-ciyaareedka 2017/2018. Waxaan haynaa fikrado badan, waxaan doonayaa in horraanta Luulyo ay kooxdu diyaar ahaato 60-70 boqolkiiba. Waxaan kaloo doonaynaa inaannu markale ka mid noqonno kooxaha ugu sarreeya caalamka annagoo ka faa’iidaysanayna suuqa ballaaran ee Chinese oo aan kordhinayno iibinta agabkeenna.”
Suuqa kala iibsiga? “Dookhyada waxaaannu la wadaagi doonnaa Montella. Magacyada qaar (Benzema, Aubameyang, iwm) runtii waa kuwa aan jecel nahay. Waxaan rabnaa inaan helno mid ka mid ah labadan laacib oo heerka sare ah. Deulofeu? Waa laacib mustaqbal leh, balse waa amaah qallalan (yacni Milan dookh ugama furna), balse waxaan la hadli doonaa Montella, “.
Shakigii laga qabey Mister Li? Wuu jirey, waa run, balse hadda waxaan haynaa xaqiiqooyinka. “
Kordhinta iibka? “Waxaan doonayaa inay AC Milan suuqa kula tartanto camaaliqooyinka kale marka ay timaaddo dakhliga suuqa taasoo ay tahay inay laba jibaaranto kana sii badato. Qaabka cusub ee Champions, waa mid isbedel keenaya, waayo kooxuhu toos bay u imanayaan, wuxuuna ka qaybgalka oo qur ihi ka dhigan yahay 50 milyan oo dakhli ah. Kaddib waxaan haysannaa suuqa Shiinaha, waa suuq wayn oo aysan kooxaha waawayni marna ka faa’iidaysanin. Milan waa koox aan caadi ahayn dhanka China, indhahayga ayaana ku arkay.
Kaddib dhanka garoonka, naadiyada sare oo dhami markii ay garoon samaysteen dakhligoodu wuu laba jibaarmey. Waa tillaabo ay qaadday Juventus “.
Mancini? Waxaan u rajaynayaa inuu kusoo laabto shaqada oo uu wax layliyo. Balse annagu waxaannu horay ula sii jaan qaadaynaa Montella“.
Yonhong Li, Han Li & Marco Fassone
"Lewandowski waa noo diyaar kulanka lugta labaad" - Rummenigge
SAWIRRO: Baro maamulka cusub ee AC Milan iyo madaxwaynohooda, madaxwaynayaashii soo maray & xiriirka ka dhexeeya Milan iyo Ingiriiska!